कति छन् गण्डकी प्रदेशमा बेरोजगार ? | NepalDut
कति छन् गण्डकी प्रदेशमा बेरोजगार ?
गण्डकी प्रदेशमा ९ प्रतिशत बेरोजगार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग केन्दीय तथ्याङ्क विभागले तेस्रो नेपाल श्रमशत्ति सर्वेक्षण सार्वजनीक गरेको हो ।
नेपाल भर ११ दशमलव ६ प्रतिशत बेरोजगार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पुरुषको ९ दशमलब ४ र महिलाको बेरोजगार दर ८।४ प्रतिशत बेरोजगार रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका तथ्याङ्क अधिकृत पृथ्वीराज सिजापतिले जानरकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशका सहरहरुमा बेरोजगार दर १० दशमलब ३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत बेरोजगार रहेको उनले बताए । बेरोजगार दरलाई प्रदेश अनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा रहेको छ । प्रदेश २ मा २० दशमलव १ प्रतिशत रहेको उनले बताए । सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ३ मा ७ प्रतिशत मात्र रहेको अधिकृत सिजापतिले जानकारी दिए ।